मिडियाले झुक्याउँदैछ : पनामा पेपर्समा मुछिएका नेपालीको नाम सार्वजनिक भाछैन, तीन वर्षअघिको सूची राख्दै उल्लु बनाइँदै – MySansar
मिडियाले झुक्याउँदैछ : पनामा पेपर्समा मुछिएका नेपालीको नाम सार्वजनिक भाछैन, तीन वर्षअघिको सूची राख्दै उल्लु बनाइँदै
Posted on April 7, 2016 April 8, 2016 by Salokya
“पनामा पेपर्स कान्ड : १३ नेपालीको नाम सार्वजनिक”
यो वा यस्तै हेडलाइनमा तपाईँले पत्रिका वा अनलाइनमा केही समाचार पढ्नु भएको छ? छ भने त्यो झुटो हो। तपाईँलाई ती मिडियाले झुटो खबर दिएका हुन्। किन झुक्याएका हुन्, तपाईँ उनीहरुसँगै जवाफ माग्नुस्। म भने त्यो समाचार किन झुटो हो भनेर तपाईँलाई प्रमाण देखाउँछु।
आजको ‘नेपाल समाचारपत्र’ले समाचारमा लेखेको छ- “विश्वभर एकसाथ तरंगा ल्याएको पानामा पेपर्स कर छली काण्डमा जोडिएका नेपालीहरुकेा नाम बुधबार सार्वजनिक भएको छ। खोजी पत्रकारहरुको अन्तराष्ट्रिय संस्था इन्टरनेसनल कन्सोर्टियम अफ इन्भेस्टिगेटिभ जर्नालिस्टले सार्वजनिक गरेको विवरणमा १३ नेपाली परेको पाइएको छ भने उनीहरुको ठेगाना र लगानी गर्न खोलिएको कम्पनीको नामसमेत उल्लेख गरिएको छ।”
यो गलत हो। बुधबार आइसिआइजेले कुनै पनि नेपालीको नाम सार्वजनिक गरेकै छैन। जुन कम्पनी र नाम समाचारमा उल्लेख छ, त्यो त ‘अफसोर लिक्स’ नाममा तीन वर्षअघि अर्थात् सन् २०१३ मा नै सार्वजनिक भइसकेका नाम हुन्।
आइसिआइजेले यसअघि तीन वटा लिक सार्वजनिक गरेको थियो :
स्विस लिक्स र
सन् २०१३ को अफसोर लिक्समा १३ जना नेपालीको लिङ्क भेटिएको भनेर त मैले पनामा पेपर्स लिक भएकै दिन अप्रिल ४ मा लिङ्कसहित ब्लग लेखिसकेको थिएँ। (पढ्नुस् क्लिक गरी) त्यहीँ थियो त सबै सूची। अनि कसरी बुधबार सार्वजनिक भयो? समाचार लेख्नेले चाहिँ बुधबार बल्ल हेरेको होला। लेख्नेले बुधबार हेर्दैमा तीन वर्षअघिको सूची बुधबार सार्वजनिक भएको हुँदैन भनेर कसले पो बुझाउने होला!
आइसिआइजेको साइट हेर्नुस् जहाँ अफसोर लिक्स सार्वजनिक भएको मिति जुन १४, २०१३ स्पष्ट उल्लेख छ-
के हो अफसोर लिक्स?
तीन वर्षअघि सार्वजनिक भएको अफसोर लिक्स झण्डै झण्डै पनामा लिक्स जस्तै विषय नै हो। २५ लाख लिक भएका फाइलहरुमध्येबाट आइसिआइजेले अनुसन्धान गरी खोज्न मिल्ने गरी डेटाबेस सार्वजनिक गरिएको हो। यसमा ब्रिटिस भर्जिन आइल्यान्ड्स, केमन आइल्यान्डस, कुक आइल्यान्डस र सिंगापुर जस्ता अफसोर स्थानहरुमा खोलिएका एक लाखभन्दा बढी कम्पनी, ट्रस्ट र फन्डहरुको विवरण खोज्न सकिन्छ। यसमा सन् २०१० सम्मको मात्र तथ्याङ्क छ।
थप विवरण यहाँ छ
नेपालको कनेक्सन जोडिएको यहाँबाट हेर्न सकिन्छ
के हो पनामा पेपर्स लिक्स?
पनामा पेपर्स लिक्स चाहिँ यो हप्ता सार्वजनिक गरिएको लिक हो। पनामामा मुख्य कार्यालय भएको अफसोरमा बैँक अकाउन्ट र कागजी कम्पनीहरु खोल्ने सेवा प्रदान गर्ने मोस्साक फोन्सेकाबाट लिक भएका दस्तावेज यसमा छ। विश्वभरका प्रमुख मिडियाहरु पार्टनर भई गरिएको अनुसन्धानमा संलग्न आइरिस टाइम्सले सार्वजनिक गरेको म्यापमा नेपालका सात जना सेयरहोल्डर रहेको उल्लेख हुनुबाहेक कुनै पनि नेपालसम्बन्धी दस्तावेज यो समाचार तयार पार्दासम्म सार्वजनिक भएका छैनन्।
अफसोर लिक्स र पनामा पेपर्स लिक्सको एउटै हुन्?
हैनन्। अफसोर लिक्स २०१३ को हो भने पनामा पेपर्स अहिलेको। पनामा पेपर्समा मोस्साक फोन्सेकाका कागजात मात्र छन् भने अफसोर लिक्सको स्रोत खुलाइएको छैन। विषय भने एउटै हो। कर सम्बन्धी प्रावधान खुकुलो र कर छुट भएका देश, क्षेत्रहरुमा खुलेका कम्पनीहरुको विवरण छ दुवैमा। एउटा लिक्सको नाममा तीन वर्षअघि सार्वजनिक सूची राख्नु पाठकलाई झुक्याउनु नै हो। तीन वर्षअघि यी नेपालीको नाम अफसोर कम्पनी खोल्ने सूचीमा थियो भनेर लेखेको भए बेग्लै कुरा।
यो सत्य नबुझी पनामा पेपर्समा मुछिएका नेपालीको नाम सार्वजनिक भन्दै तीन वर्षअघि प्रकाशित लिक्सका नाम राखी पाठक झुक्याउने समाचारमध्ये केही नमूनाहरु हेर्नुस्-
‘पानामा पेपर्स’ कर छली काण्डमा मुछिएका नेपाली को को ? (उज्यालो)
यस्तो छ पानामा लिक प्रकरणमा मुछिएका नेपालीहरुको विवरण (रातोपाटी)
सेतोपाटीले पनामा पेपर्स काण्डः १३ नेपालीको नाम सार्वजनिक (सूचीसहित) शीर्षकमा समाचार हाले पनि पछि तथ्यसंगत नभएकाले हटाएका छौं भनेको छ।
8 thoughts on “मिडियाले झुक्याउँदैछ : पनामा पेपर्समा मुछिएका नेपालीको नाम सार्वजनिक भाछैन, तीन वर्षअघिको सूची राख्दै उल्लु बनाइँदै”
मिडिया हरु ले समाचार लेख्दा तथ्य संगत भएर लेख्नु पर्छ ….
पाठक लाइ तान्ने बहाना मा आकर्षक हेडलाइन मात्र बनाएर हुदैन
rma chaudhary says:
म्ौले बुझे अनुसार त्यो समाचार गलत होइन । पनामा पेपर्सले लिक गरेका नाम सन् १९७७ देखि २०१५ सम्मका हुन् र जुन सूची सार्वजनिक भएको छ त्यो सन् २०१३को भएपनि भर्खर निस्केको हो । पुरानो भएपनि भर्खर प्राप्त सूचना पनि पाठककालागि उपयुक्त नै हुन्छन् । त्यसैले कसैलाई गाली गलौज गर्नु भन्दापनि सही कुरा यो हो त्यसैले यो चाहिं गलत हो भन्दिएको भए हुन्थ्यो । हचुवाका भरमा मैले भनेको चाहिं ठीक अरु सबै गलत भन्ने कुरा आफैंमा लज्जास्पद कुरा हो । पनामा पेपर्समा परेका नेपाली चाहिं को होलान् त ? त्यो पनि भनिदिए सुनमा सुगन्ध हुने थियो । त्यसैले सन् २०१३ सम्मको सूची आएपनि सन् २०१५ सम्मको फेरि आउने संभावना रहेको रुपमा बुझदा कसो होला ? घोडा चढ्ने कहिलेकाहिं लड्छन् । माइसंसारका गल्ति पनि देखिएका छन् । अरुका पनि देखिएका छन् । कुनै दैनिक पत्रिकाको पहिलो पेज नै ठीक एक महिनापछि जस्ताको तस्तै छापिएको पनि देखिएको छ । कतिपयले प्रधानसेनापतिलाई प्रधानमन्त्री भनेर लेखेका कुरा पनि छन् । उदाहरण खोज्ने हो भने हजारौं विवरण आउन सक्छन् । त्यसैले यी १३ जनालाई जोगाउनुपर्दथ्यो भन्ने कुरा त्यति तर्कसंगत लाग्दैन ।
अफसोर लिक्स र पनामा पेपर्स लिक्स फरक कुरा हुन्। समाचारमा अफसोर लिक्स भनेर लेखिनु पर्थ्यो। हुँदै नभएको विवरण बुधबार सार्वजनिक भयो भनेर लेखिनु गलतै हो। यसको बचाउ गर्ने काम पनि गलतै हो
Pingback: माइसंसारको ब्लगपछि यसरी सच्चाइए समाचार « Mysansar
धेरैले येहि news दियेको छ माइसन्सार ले मात्र खन्डन गरेको छ I trust my संसार
नेपाल समाचार पत्र को कुरा पत्याएर पनि साध्य हुन्छ ?? काठमाडौँमा मात्र छर्ने र जम्मा जम्मी ५०० प्रति छापेर पत्रुकार हुण्डी र थर्काई थर्काई माडे बिज्ञापन लिने काम मात्र हो यसको !! तोईत यस्ता गाईजात्रे पत्रिका को पनि के कुरा गर्नु !!
It doesn’t matter which leaked paper has got the name of nepalese white colored people our government can’t even touch them it’s worthless. Nabil bank owned by binod chowdhary is also belong to such kind of company registered in norway to avoid the tax from nepal.
यसै कारण ले त मैले विस्वास गर्ने मात्रै my sansar हो.